चुपचाप कागतिहारको दिन कसैलाई थाहा नहुने गरी खरिद गर्नुहोस् यी ४ चीज धन दोब्बर हैन हुनेछ तेब्बर – aajnepal
HomeNewsचुपचाप कागतिहारको दिन कसैलाई थाहा नहुने गरी खरिद गर्नुहोस् यी ४ चीज धन दोब्बर हैन हुनेछ तेब्बर
चुपचाप कागतिहारको दिन कसैलाई थाहा नहुने गरी खरिद गर्नुहोस् यी ४ चीज धन दोब्बर हैन हुनेछ तेब्बर
काठमाडौँ । हरेक वर्ष कात्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशीको तिथीका दिन अर्थात धनवन्तरी त्रयोदशीका दिन काग तिहार मनाउने गरिन्छ । काग तिहारको दिनलाई धनतेरस पनि भन्ने गरिन्छ । यो दिनलाई धनका देवता कुबेरको जन्मदिन र आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरीको एक पर्व पनि हो ।
यो दिन नेपालको तराई क्षेत्रमा नयाँ भाँडा कुँडा किनमेल गर्नुको साथै सुनचाँदीको गरहगना किनमेल गर्ने चलन रहेको छ । धनतरेसको दिनमा कागको पुजाआज गरि दिपदान गर्ने गरिन्छ । यस दिन घरमा विभिन्न वस्तुहरु किनेर भित्र्याउनाले वर्षभरि धन प्राप्त हुने र लक्ष्मी सधै साथमा रहने विश्वास रहेको छ ।
आज हामी तपाईलाई काग तिहारको दिन कसैलाई थाहा नदिई घरमा भित्र्याउने सामानको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ । जसले गर्दा घरमा आर्थिक लाभ हुन्छ ।
धनियाका दाना : काग तिहारको दिन तपाईले आफ्नो घरको बगैँचामा धनियाँको दाना कसैलाई थाहा नदिई लक्ष्मी माता प्रसन्न हुने मान्यता रहेको छ । गरगहना स् काग तिहारको दिन सुन तथा चाँदीका गरगहना खरिद गर्नु शुभ मानिन्छ । कसैलाई थाहा नदिइकन खरिद गरेको गरगहना लक्ष्मीलाई अर्पित गरेमा धन लाभ हुनेछ ।
झाड़ू : उक्त दिन घरमा नयाँ झाडुले कसैलाई थाहा नहुने गरि ल्याएर सफा गरेमा लक्ष्मीको अनुग्रह मिल्नेछ । शान्त घर, सफा र उज्यालो मन पन पर्ने भएकाले लक्ष्मीले घरमा बास गर्ने छिन् ।
नुन : काग तिहारको दिन नुन खरिद गरिएको नुन प्रयोग गर्नाले स्वास्थ्यमा राम्रो हुने मान्यता रहेको छ । नुन खरिद गर्दा कसैलाई नदेखाएमा अझ राम्रो हुनेछ ।
तपाईलाई थाहा छ श्रीमती कति किसिमका हुन्छन् ? ७ प्रकारका श्रीमती मध्ये तपाईकी कुन ?
अमेरिकामा नेपाल भन्दा २५ उल्टो संस्कार, पढेर शेयर गर्नुहोस्